Amathiphu wokulungiswa kwansuku zonke kwe-bikini Swimuits
Ukuze kulondolozwe ukuqina nobala obufanayo ne-bikini ehlobo elilandelayo, ukulungiswa kwansuku zonke kubaluleke kakhulu. Lokhu okulandelayo amaphuzu okufanele anakeke ekunakekelweni kwe-bikini kwansuku zonke. Ukwelula impilo ye-bikini yakho, ungalandela ukwenza. 1.Cleaning o ...
Izinga le-brand ephezulu ye-10 ye-bikini
IBikini isebenzisa ubuncane bendwangu kanye nesembozo esincanyana ukukhulisa ubuhle bomzimba waphezulu nokuma komzimba. IBikini yandisa ubuhle bangaphandle bempilo yabesifazane nokuzethemba. Yimiphi imikhiqizo yabesifazane be-bikini? Nazi izinhlobo eziyishumi eziphezulu ze-bikini eziholwa nguLa Perla kuwo wonke umuntu. Cha.1 ...
I-Canton Fair Swimwear Products Exhibition
Ngemuva kweminyaka engaphezu kwengu-20 yentuthuko, iCanton Fair Swimwear Show idale ngempumelelo umphakathi wayo, ihlanganisa ndawonye abantu abaphezulu nabaqeqeshiwe abavela emhlabeni wonke unyaka nonyaka. Khuthaza ibhizinisi phakathi kontanga. Imibukiso yokubhukuda yaziswa kakhulu. Kunemibukiso eminingi yokubhukuda manje, ...